Nei Bvudzi Richigadziriswa Kushanda Kwakachipa muTurkey? - Cure Kutsvaga
Nei Bvudzi Richigadziriswa Kushanda Kwakachipa muTurkey?
28 June 2021 28 June 2021 mushongabooking
Zvikonzero Nei Iwe Uchigona Kuwana Anotengeka Bvudzi Kuisa muTurkey neMhando yepamusoro
Turkey inonyatso kuzivikanwa nekuita bvudzi kuisirwa pamutengo wakaderera pane dzimwe nyika. Izvi hazvireve, zvakadaro, kuti makiriniki avo anopa ekurapa kwepasi-mhando. Imhaka yekuti Kuveura bvudzi kweTurkey mari dzakaderera pane dziya dzedzimwe nyika dzakabudirira. Nekuda kweizvozvo, makiriniki ekuisa bvudzi muTurkey anogona kupa ekumusoro-mutengo marapirwo akafanana kana ari nani mhando.
Kunyangwe iwe ukasanganisira mutengo wekugara mune invoicing, haizopfuure 50% yeiyo mitengo yemitengo mune mamwe marudzi. Nekuda kweizvozvo, hazvishamise kuti varume vazhinji vari kuwedzera kufarira kuenda kuTurkey uye kuve nekubviswa bvudzi kubva munyika inonyanya kugadzirisa bvudzi uye kumwe kurapwa.
Turkey nderimwe remarudzi mashoma pasi rose uko kwese kwese kwehutano-kwehutano kunopihwa mahara kune vese vagari. Izvi zvakatendera kumisikidzwa kwezvipatara mumaguta ese eTurkey pamusoro pemakore, pamwe nekupihwa basa kwezviuru zvemachiremba ekurapa. Dzidzo yekurapa yakashanduka nekufamba kwenguva, zvese kumasangano uye mukuita.
NdivanaChiremba veKuchenesa Bvudzi muTurkey Vane ruzivo? Statistics
Vagari vepasi rese vakatenderedza vanhu vanosvika mabhiriyoni manomwe, uye zviuru mazana matatu nesere makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe vakapedza kudzidza kubva munzvimbo ino, nepo vanhu veTurkey vari mamirioni makumi masere, uye zviuru makumi manomwe nezvishanu zvevadzidzi vanodzidzira mushonga muzvikoro zana. Nekuda kweizvozvo, Turkey yakapfuura vanachiremba zana nemakumi mashanu pavanhu zviuru zana, inova nhamba yevanachiremba pamunhu mumarudzi ane mari zhinji. Sekureva kweongororo yeOECD, Turkey ine vadzidzi vazhinji vezvikoro zvekurapa kupfuura Greece, New Zealand, France, neUnited States, iine huwandu hwepakati pe7 pavanhu zviuru zana.
Varwere vanogona kuva nechokwadi chekuti, zvichibva pamakore ehunyanzvi, ivo vanowana ekurapa emhando yepamusoro uye akabudirira maererano nemabatiro echirapa uye mutengo zvachose. Izvi zvinokwezva bvudzi kuisirwa tarisiro muTurkey, zvakadaro, zviri pamutemo chete kana kuvhiya kwacho kuchiitwa mukiriniki ine mukurumbira ine ruzivo, chiremba anokwanisa uye timu yakarovedzwa yekurapa. Cure Booking ine network pamwe nezvimwe zvakanaka zvipatara nemakiriniki muTurkey.
Akachipa Bvudzi Anoshandura muTurkey
Iwe unogona kunge wakanzwa zvakawanda nezvazvo bvudzi rinochinja muTurkey, pamwe nemukurumbira wenyika senzvimbo yekuvhiya kwekuzora. Mitengo yakaderera yekushandurwa kwebvudzi nekuvhiyiwa muTurkey chinja zvachose maonero ako, zvinokurudzirwa nechishuwo chekuda kudzidza zvakawanda nezve uyu mukana wegoridhe waisazivikanwa. Icho chaimbove chiitiko chinofadza chakashanduka chikaita gomba rerima nekusaziva. Nei kuiswa kwebvudzi muTurkey kuchidhura zvakanyanya? Aya maitiro akajairika mutsika umo mutengo wave unokosha geji yemhando.
Vazhinji varwere, kune rumwe rutivi, havazive nezve mutsauko mune zvehupfumi hwenyika, uye kuti izvo zvinoshandiswa, kana zvichienzaniswa neavo vari muUnited Kingdom neUnited States, vanoita sarudzo yekudzoka kana kuita mubvunzo wemafungiro. Wasvika panzvimbo chaiyo kana uchifarira kudzidza zvakawanda nezvehupfumi kana kubvisa zvinokunetsa.
Nei Bvudzi Kuisa Zvakachipa muTurkey kupfuura Nyika dzeEurope?
Vanhu vazhinji vanoita chikanganiso chekusaisa mari mumutengo wekugara muTurkey kana vachienzanisa mari yekuvhiya. Turkey haina kudhura kune varwere vanobva kuUnited States, United Kingdom, kana Europe vanowana mari yavo mumadhora, mapaundi, kana maeuro. Izvo, zvakadaro, zvisingakwanisike kune munhuwo zvake anogara pano. Kunyange madhora mazana maviri nemakumi mashanu angaita kunge asingadhuri kwauri, haisi kana uchienzaniswa neavhareji mari muTurkey.
Mutengo Wekurarama uye Kukosha Kwemari
Kana iwe uchifananidza mararamiro akadhura zvakanyanya kune avhareji emwedzi mibairo yevagari veTurkey, iwe uchaona kuti kuvhiyiwa kuri kure nekudhura.
Semuenzaniso, avhareji yemwedzi pamari muUnited Kingdom ingangoita 4,600 GBP, kana kutenderedza 55,931 Turkish Liras. Kana murwere achida anosvika kumazana mashanu nemazana mashanu emadhiri, iwo chaiwo mutengo weFUE kuvhiyiwa anenge mazana makumi matatu emapaunzi. (Mutengo unosiyana zvichienderana nenhamba yekumisikidza inoiswa; avhareji huwandu hwezvinodiwa nemurwere ingangoita zviuru zvishanu nemazana mashanu.)
Medical Zvigadzirwa Zvakagadzirwa Munzvimbo muTurkey
Maitiro aya anowedzera kuTurkey yakachipa-yehutano-yekurapa uye yekuvhiya mari. Turkey inosarudza kugadzira zvinhu uye zvigadzirwa munyika kwete kuendesa kunze. Kuti iratidze rutsigiro, Turkey inotengesa zvinhu zvinounzwa kubva kunze kwenyika uye zvinhu nemutengo wakakwira zvakanyanya kupfuura izvo zvinogadzirwa muno. Nekuda kweizvozvo, pachave nekuwanda kwekugadzira kwemuno uye kushoma kwekunze. Nekudaro, kutumira, zvigadzirwa, uye fizi yetsika hazvichasanganisirwe mune yekupedzisira mutengo nhanho.
Nekuda kweizvozvo, mitengo inodonha, kwete nekuti hurumende iri kuibhadhara, asi nekuti mutengo wakazara wekugadzirwa kwemisha wakaderera pane izvo zvezvinhu zvinounzwa kunze kwenyika. Nekuda kweizvozvo, kuvhiyiwa uye kurapwa muTurkey zvakadhura zvakanyanya kupfuura kuEurope kana kuUnited States.
Misiyano mukutenga Simba Parity uye Yakachipa-inodhura Bvudzi Shanduko
Zvakanaka, unoti, asi Europe neUnited States imwe neimwe inogadzira michina yayo, uye mari yekuvhiya inoramba yakakwira. Chokwadi, asi kugadzirwa kwemuno ingori chinhu chimwe chete cheiyo equation. Zvakare, kana uchifunga misiyano mukutenga simba parity (PPP), kuverenga kunova nyore. PPP inoshandisa nzira inozivikanwa se "bhasikiti yezvinhu" kuenzanisa mari dzenyika mbiri. Zvichingotaurwa, nyika mbiri dzakaenzana kana dengu rezvigadzirwa munyika mbiri iri mutengo mumwe chete.
Chiyero chePPP pakati peUnited States neTurkey chiri pa1.451. Mune mamwe mazwi, zviwanikwa zveTurkey zvakachipa, ndosaka, kunyangwe hazvo nyika dzese dzichigadzira zvigadzirwa zvavo mudzimba, mitengo yekugadzira mune dzimwe nyika yakakura kudarika muTurkey.
Mukupedzisa, kunzwisisa mashandiro anoita nyika ndiyo kiyi yekunzwisisa nei kushandurwa kwebvudzi kwakachipa muTurkey. Mitengo yakaderera haina chekuita nehunhu uye zvese zvine chekuita nezvehupfumi. Kwako semushanyi wekurapa achiwana madhora, maeuro, kana mapaundi, mhosva dzinogona kunge dzisingadhuri.
Kana ichienzaniswa ne mari yehupenyu muTurkey, iyo inosanganisira zvese kubva padzimba kusvika pakudya kusvika kuvaraidzo kusvika kumabhiri, avhareji mutengo wekuvhiya muTurkey iri pasingasvikike kune huwandu hwevanhu. Turkey inogadzira michina yayo, ichideredza huwandu hwemari inoshandiswa pakutakura, kutakura, uye tsika. Zvakare, nekuda kwekusiyana mukutenga simba parity, zvinodyira Turkey mari shoma yekugadzira zvinhu kupfuura zvazvinoita kuUnited States.
Muchidimbu, nei kuiswa kwebvudzi muTurkey kuchidhura? nekuti uri mutorwa uye unobva kunze kwenyika. Taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve bvudzi rinodhura kwazvo muTurkey nemitengo yayo.
Iyo Yakanyanya Bvudzi Kuisa Kushanda muTurkey
Ndeupi Webvudzi Rutsvairo Rudzi Ruri Nani? FUE vs DHI…
Mari Yekupfekera Bvudzi Yakawanda Sei muTurkey mu…
Iyo Yakanakisa Afro Bvudzi Kuisa muTurkey kweMukadzi neMurume
Turkey Bvudzi Kudyara Maitiro Kudzoreredza uye Mhedzisiro
Kuchenesa Bvudzi muTurkey- Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo
← Yakawanda Sei Inodzoreredzwa Mari muTurkey? 2021 Mitengo
Tummy Tuck Inodhura Kune Dzimwe Nyika: Zvakawanda Sei muEurope? →